Home Dabere na Home Franchises maka ire | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franchises si n'ụlọ
Franchises Home Dabere na Nhazi
Franchises Basedlọ nke Ndabere
Ntuziaka zuru ezu Iji Franchise
Ntuziaka zuru ezu maka ohere Franchise you maara na ihe karịrị 50% nke £ 15.7bn mgbasa ozi na-emefu ga-aga na dijitalụ na ...
Chlọ Franchise nke Dabere n'ụlọ bụ otu n'ime nhọrọ ndị kachasị ewu ewu nke franchise, yana otu n'ime ọnụ ala kachasị. N'ihi na franchises dị n'ụlọ anaghị achọ ka ịnwe ụlọ ọzọ, ha na-amalitekarị site na itinye obere ego na-achọkarị naanị ekwentị na laptọọpụ. Ofgwọ ịmalite otu n'ime azụmaahịa ụlọ ndị a dị obere belata nke ukwuu karịa ego ole gụnyere ịmalite blọklo nke dị n'ọfịs ma ọ bụ ụlọ ahịa.
Abamuru nke Franchise Dabere n'ụlọ
Enwere ọtụtụ uru ịnweta ụlọ mgbasa ozi sitere na ụlọ, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ ugbu a ịrụ ọrụ n'ụlọ.
mgbanwe - ị setịpụrụ oge a. Ọtụtụ franchise a na-achọ ịlụ ugbu a na-ahọrọ ugbu a maka aha franchise n'ụlọ n'ihi na ọ na-enyere ha aka ịhazi usoro ọrụ ha na ezinaụlọ ha na nkwa onwe ha. Ọtụtụ franch n'ụlọ enwere bụ obere oge, nke pụtara ị nwekwara ike ịdabere ha na ọrụ ọ bụla dị adị ị nwere.
Etinye obere ego - ị na-ejikarị franchise dị n'ụlọ na-achọ naanị ka ịnwere ekwentị, ịntanetị na laptọọpụ / kọmputa. N’achọghị ọfịs, ị nwetagola ebe ị na-arụ ọrụ. Ego ndozi ego franchise fọdụrụnụ na-ekpuchikarị ihe dị ka weebụsaịtị nke gị, ụlọ ọrụ, mgbasa ozi inyocha na iji aha njikwa franchisor.
Innọ n'ụlọ gị - ọ n’agaghị ekwu na nnukwu uru bụ ịnọ n’ụlọ gị. Ọ pụtara na ịgaghị echegbu onwe gị banyere nwatakịrị na-elekọta ụmụaka, ọ pụtara na ị gaghị alụ ọgụ nke oge ọgba aghara, yana nke kachasị na ọ pụtara na ị nwere ike ịrụ ọrụ site na nkasi obi nke ụlọ nke gị.
Uru ọzọ a na-enweta n'ụlọ nwere ike ịsụ site n'ụlọ bụ ka ị na-azụ maka onwe gị, mana ọbụghị n'onwe gị. N'adịghị ka mmalite azụmaahịa, franchise bụ ezigbo ego na azụmaahịa azụmahịa nke emepụtagharịrị gafee ọtụtụ franchisees na ókèala ha.
Pesdị Basedlọ Dabere Franchises
E nwere nnukwu ohere dị iche iche dị n'ụlọ nwere taa, na-anọchite anya ohere ịbụ onye isi gị mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ gị. Iji nwee ihe ịga nke ọma na ntanetị nke dị n'ụlọ, dị ka ọ dị n'asụsụ ọ bụla, ị ga - ahọrọ ihe ị nwere mmasị na ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga - achọpụta na ị na - egbu oge ma ọ gaghị arụ ọrụ ya nke ọma.
Lee ụfọdụ ụdị franchises dị n'ụlọ nke Franchiseek achọpụtala na ọ bụ ndị ama ama.
Nchịkwa Franchises - njikwa azụmaahịa anaghị achọ ka ị nwee ọfịs. Nlekọta njikwa na-abụkarị nke ụlọ ebe ị na-ejikwa otu ndị ọrụ na-arụ ọrụ ntuziaka. Ọrụ gị ga-agụnye hụ na ndị ọrụ ga-arụ ọrụ kachasị ma mezie nchegbu ọ bụla otu gị nwere.
Zụ ahịa - site na ire ezumike dị ka aha nke ụlọ a na-akwụ ụgwọ ụlọ, rue ire nke aka gị na azụmaahịa azụmahịa gị, enwere ọtụtụ ụdị franchise ọrịre ị nwere ike ịrụ site n'ụlọ.
Digital Digital na SEO franchise - franchise dị ka Start Up Edge na-enye ndị ahịa ha ọtụtụ ahịa ahịa dijitalụ na SEO, gụnyere imewe weebụsaịtị na PPC. Enwere ike ịre ahịa Digital Digital Franchises site na nkasi obi nke ụlọ nke gị ebe ị na-enyere azụmaahịa ndị ọzọ aka itolite ma na-aga nke ọma.
Chọọ ohere dị iche iche dị n'ụlọ ji arụ ọrụ n'okpuru.